Degmada Xudur oo laga hirgelinayo mashaariic horumarineed – Radio Muqdisho
Degmada Xudur oo laga hirgelinayo mashaariic horumarineed
Guddoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo xafiiskiisa kula shiray qeybaha bulshada, saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo maamulka degmada ayaa uga warbixiyay socdaal uu ku tegay Muqdisho iyo dalka dibadiisa iyo waxhaabihii u qabsoomay.
Maxamed Cabdi Tool oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in socdaalkii uu ku tegay Muqdisho iyo meelo kale oo ka baxsan dalka ay ugu soo idlaatay guul, isagoo intaa ku daray in dhawaan degmada Xudur iyo deegaannada kale ee ku xeeran ay ka hirgelin doonaan mashaariic horumarineed oo waxtar u leh bulshada.
Guddoomiyaha gobolka Bakool ayaa ku booriyay qeybaha kala duwan ee bulshada inay ka qeyb qaataan sugidda amniga, si mashaariicda laga hirgelinayo gobolka ay u noqdaan kuwa ay ka faa’iideystaan bulshada Gobolka ku nool.
Korneyl Timo-cadde oo ah korneylka ugu sareeya ciidamada xoogga dalka ee ka howlgalla gobolka Bakool ayaa sheegay in deegaanno badan oo hoostaga degmada Xudur ay ka sameeyeen howlgallo ay kaga sifeynayeen haraadiga kooxda Shabaab, waxaana uu intaa ku daray inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Shabaab.
Maamulka degmada Jalalaqsi oo ku baaqay in laga caawiyo adeegyada caafimaadka
Hooyo Soomaaliyeed oo Sadax wiil oo mataano ah ku umushay Isbitaal Muqdisho ku yaala.DAAWO.